I-China Embossed aluminium sheet fektri kanye nabakhiqizi | Hanyu
Amashidi we-aluminium afakiwe
Ukukhethwa kwe-aluminium plate substrate yokukhethwa kwe-1060, 1100, 3003 namanye amamaki, ngokuhlobisa okuhle, ukumelana kokugqwala, izici ezinhle zokuhambisa umoya we-orange peel embossed aluminium coil substrate Ukukhetha kwe-1060, 1100, 3003 namanye amamaki, ngokuhlobisa okuhle, ukumelana nokugqwala kanye nokusebenza okuhle kokushisayo.
Njengohlobo olusha lwezincwadi zeshidi, ipuleti le-aluminium elihlanganisiwe lamukelwe kabanzi emakethe. Amapuleti we-aluminium afakiwe akagcini ngokuba nezicelo eziningi emafektri nasezindlini zokugcina, kodwa futhi athandwa ngabantu abaningi ekuhlobiseni kwasekhaya. Umbala wepuleti le-aluminium emboss muhle, isakhiwo silula, kanti nengaphezulu likhanya,. Ngakho-ke yini okufanele sinake lapho sinakekela ipuleti le-aluminium elihlanganisiwe ekhaya lethu? Manje, ake sikhulume ngakho.
I-1, inqubo yombala we-aluminium embossed ocacile, kufanele siyihlanze kusuka phezulu kuya phansi, kusukela ngaphandle kuya ngaphakathi kwepuleti le-aluminium. Uku-oda kumele kwenziwe ngokuhambisana nezinhlinzeko ezifanele zo-oda, ngaphandle kwalokho kungadala ukulimala okuthile ekunyatheleni ipuleti le-aluminium.
1. Isifandesi se-evaporator.I-thermal conduction yokusebenza kwe-aluminium embossed yi-237W / mK, okungcono kunalokho okwenziwa yinsimbi. Ngaphansi kwezimo ezilinganayo, ijubane lokupholisa lishesha, umphumela wokupholisa uzoba ngcono. I-aluminium efakwe ku-aluminium efakwe ku-5052 ipuleti le-aluminium inemisebenzi emihle yokulwa nokugqwala kanye nemisebe yokulwa nemisebe, eyandisa kakhulu impilo yesevisi yeziqandisi. Amafriji amaningi eChina asebenzisa i-aluminium plate evaporator.
2, izinto zokwakha zokuhlobisa ezifana nephethini yodonga lwe-aluminium odongeni), ishidi le-aluminium eligoqiwe libukeka likwazi ukufeza zonke izinhlobo zamaphethini, lingaqhubeka nokusebenzisa i-anodic oxidation ekubukeni kwayo, njengokucubungula inqubo, ukuze kutholakale ukuhlelwa okuhambisanayo , umbala kanye nokubukeka kokugxila kwayo kokuhlobisa kufanele kucatshangwe njengamanje, ngokujwayelekile, izinto ezinhle zokumelana nokugqwala, amandla okusebenza we-anode, imisebenzi yokuphrinta ukubukeka, imisebenzi yokulinganisa ikhono elihle kakhulu.
I-3, isitoreji esibandayo, i-compartment, i-wheel cabin floor, imvamisa nge-aluminium engu-0.61mm emihlanu eboshwe imichilo, inomsebenzi omuhle wokulwa ne-skid, ukumelana nokugqwala okungcono ngokungeziwe kule ndima engenhla, ipuleti lethu le-aluminium elihlanganisiwe lingasetshenziselwa okulandelayo izici:
Uhlobo lwe-alloy: amashidi we-aluminium angu-8011
Ukuqina (mm) ： 0.1-0.8
Ububanzi (mm) :: 350-1200
I-Lenght (mm) ~ 350-1500
Izicelo: i-coil aluminium ehlanganisiwe isetshenziselwa kakhulu ukufudumeza phansi, umhlobiso, ibhodi yangaphakathi esiqandisini neminye imikhiqizo.
Azikho izindawo ezinamafutha / ama roll roll / ukugqwala okumhlophe / ukulimala emaphethelweni / amatshe / izimbobo / izibazi nokunye okonakele
Esedlule: 1100 i-aluminium strip
Olandelayo: I-aluminium foil ye-evaporator ehlotshisiwe
Abahlinzeki be-aluminium abafakiwe